Cunto: Sida loo Joojiyo Mishiinka Raadinta adigoo ku dhejinaya boggaaga WordPress
Dad badan ayaa raba in ay joojiyaan mashiinno raadin laga bilaabo raadinta bogagga shabakada WordPress. Waxaa laga yaabaa in ay kugu adkaato, laakiin qaar ka mid ah dadka ayaa aaminsan in mashiinnada raadiyaha aysan aheyn in ay gurguuraan goobahooda ilaa ay si buuxda u diyaargaroobaan. Haddii aad tahay xirfadle website-yahan khibrad leh ama bogga internetka, waa kuu sahlan tahay inaad joojiso matoorada raadinta adigoo raadinaya boggaaga. Haddii aad horay u soo dejisey websaydo adoo isticmaalaya WordPress, ma adkaan doonto inaad ku joojiso Google adigoo raadinaya bogaga internetka. Waxaad u baahan tahay inaad sameyso isbeddello dhowr ah. Dadka qaar ayaa jecel inay ka shaqeeyaan goobaha nololeed halkii ay abuuri lahaayeen jawi degaan - vendita tappeto antitrauma. Iyo qaar ka mid ah shakhsiyaadka jecel in ay marti galiyaan mashaariicda iyaga u gaarka ah si ay u dhisaan faylalkooda si ay u helaan macaamiil badan. Sidaa darteed uma baahna inay muujiyaan goobahooda maaddaama miisaaniyaddu ay aad uga muhiimsan tahay.
Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Nadaafad Adeegyada Dijital ah, wuxuu halkan ku tilmaamayaa tilmaam wax ku ool ah si loo joojiyo mashiinka raadinta adigoo ku dhajinaya website-kaaga iyo sababta aad u sameyn lahayd.
Isticmaalka koodhka maamulka WordPress
Tallaabada kowaad iyo kan ugu muhiimsani waxay isticmaalaysaa guddi maamul ee WordPress si ay uga hortagaan makiinadaha raadinta ka soo jeeda oo ay ku gartaan bogagga shabakadda. Haddii aad taqaanno WordPress, waa inaad ka warqabtaa pluginsiga loo isticmaali karo arrintan. Tag xulaha Doorashooyinka oo hoos u dhig. Halkan waxaad ka arki kartaa sanduuqa "checkbox" kaas oo aad u baahan tahay inaad gujiso si aad u joojiso matoorada raadinta ka soo dhejinta boggaaga WordPress. Markaad samayso, waa inaadan ilaawin inaad kaydiso dhammaan goobahaas ka hor inta aan la xirin daaqadda..
Ku dar darajooyinka meta qaybta Header
Waa muhiim inaad ku darto qoraalka meta ee madaxa iyo boggaaga boggaaga WordPress. Waxaa jira labo ikhtiyaar: waxaad isticmaali kartaa plugin WordPress ah si aad u hesho shaqadan ama aad u tagto faylasha mawduuca iyo ku dheji fariimaha qoraallada gacanta. Ku darida darajooyinka meta ee qaybaha hoose iyo qaybta hoose waa mid muhiim ah, mana u oggolaan doonto in makiinadaha raadinta raadiyo bogaggaaga. Dad badan ayaa isku wareersan sida loo beddelo faylasha sida, laakiin waa tallaabo sahlan oo toos ah. Waxaad u baahan tahay kaliya in aad wax ka beddesho faylasha Robots.txt si aad u xakamayso gawaarida webka.
Tijaabinta faylasha robots.txt si loogu xakameeyo walxaha webka
Waa suurtogal in la soo rogo faylasha robots.txt si looga hortago makiinadaha raadinta ka raadinta goobtaada. Faylkan waxaa loo isticmaalaa in lagu xareeyo bogga iyo boggaga internetka. Waxaad arki kartaa boggaga aad rabto in aad muujiso iyo midkale oo loo baahan yahay in la dhajiyo. Iyadoo ku saleysan, waxaad hagaajin kartaa goobaha oo ha ilaawin inaad kaydiso goobahaas. Waxa kale oo suurtogal ah in la mamnuuco dhammaan kabaha isku mar. Faylkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad fuliso hawsha si habsami ah oo u joojiso kuwa ku dhexjira websaydhada si ay u kiciyaan website-kaaga. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad sameysid dhowr fayl oo qoraal ah oo aad ku qorto koodh gaar ah. Keydso dhammaan faylashaas ka hor inta aan la xirin daaqada.
Waxaad joojin kartaa mashiinnada raadinta si aad u dhisto boggagaaga adoo adeegsanaya wicitaanno sir ah. Tani, waa inaad tagtaa cPanel ee goobtaada oo guji ikhtiyaarka (Nabadgelyada Badbaadinta Password). Tani waxay kuu furan doontaa bog cusub, halkaas oo aad ka arki karto dhowr wadiiqo. Halkan, waa inaad raadisaa diiwaanka-guud-diiwaanka HTML halkaas oo magaca isticmaalaha iyo sirta lagu geliyo. Iyadoo aan xogta ku jirta qaybtan, makiinada raadinta waligeed ma socon karto goobtaada
Iyadoo la tixraacayo hababka kor ku xusan, ku dhowaad dhammaan websaydhiyaadka iyo bloggers waxay joojin karaan matoorada raadinta iyagoo ka soocaya boggooda internetka